यसरी ठगिन्छौ उपभोक्ता | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / यसरी ठगिन्छौ उपभोक्ता
यसरी ठगिन्छौ उपभोक्ता
Posted by: युगबोध in विचार July 11, 2018	0 81 Views
हरे क वस्तु वा से वा लिदा हामी उपभो क्ता ठगिएको ठगियै छौ ं । हामीमध्ये धे रै ले आफू ठगिएको थाहा पाउदै नौ ं । कतिले थाहा पाए पनि बो ल्दै नौ ं । प्रतिकार गर्दै नौ ं । अधिकार खो ज्दै नौ ं । हाम्रो मौ न स्वीकृतिले पनि उपभो क्तालाई ठग्ने ले प्रश्रय पाएका छन् ।
एकजनाले घो डामा चामल लादे र बाक्लो े वस् तीमा चामल बे च्न पुगे  । उनले उपभो क्तालाई भने यो चामल नाप्नै पर्दै न, पूरा एक क्वीन्टल (१०० के जी) छ भने  । उपभो क्ताले तौ ले र लिने कुरा भएपछि उनले एउटा मिलको बिल दे खाउ“दै भने हे र्नुस् एक क्वीन्टलको बिल छ । मूल्य पनि यसै मा छ । ढुवानी र श्रमवापत दुई सय दिनुहो ला । तर उपभो क्ताले जो खे रै लिने अड्डी लिएपछि उनी त्यहाबाट हिडे  । यसको मतलव यो चामल एक क्वीन्टलमा दश के जी जति कम थियो  । ९० के जी बे चे र सय के जीको पै सा लिने उनको खे लो रहे छ ।
मै ले एकजना गाउ“बाट दूध लिएर आउने मित्रलाई भने ं मलाई पे वर दूध चाहियो । बच्चालाई खुवाउने दूध हो पानी नहाल्नू । उनले पनि पानी नहाल्ने कुरामा सहमति जनाए र दूध ल्याउन शुरु गरे  । पै लो दिन ठिकै ल्याए । एक हप्तापछि दूध विचार गर्दा ५० प्रतिशत पानी हाले को पाइयो  । मै ले उनलाई भने दूध त बिग्रिएछ । उनले तुरुन्तै भने ओ हो बो तल साटिएको रहे छ । पे वर दूध र पानी हाले को दूधको बो तलस“गै थियो  । लौ भो लिबाट राम्रो आउ“छ भने  । तर राम्रो आएन र अनि दूध किन्न छुटाइदिए“ र डे रीको दूध किन्न थाले ं ।
त्यसो त दूधमा पानी मिसाउने कुरा सामान्य जस् तो लाग्छ । मासुमा पनि उस् तै छ । मासु किन्ने ठाउ“मा गयो भने नियमित ग्राहक जसले दिनमा पा“च÷छ किलो उठाउ“छ उनीहरुलाई राम्रो मासु छुट्याइन्छ बा“की नराम्रो मासु आधा किलो एक किलो किन्ने लाई दिइन्छ । त्यसमा उपभो क्ता ठगिएकै छन् । तरकारी र फलफुल पसलमा उत्तिकै ठगी छ । ६० रुपै या“को तरकारी एक पाउ किन्दा २० रुपै या भन्छन् । यसको मतलव पाउ किन्ने लाई किलो को ८० रुपै या“ प¥यो  । फलफूलमा त्यस् तै छ । किलो को एक सय ५० रुपै यँ“को फलफूललाई पाउ किन्दा दुई सय रुपै या“को मूल्य बताइन्छ ।
गाडी चढ्दा उस् तै छ । सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नपाइने भए पनि खासगरी किया, हायस, जीपहरुमा मनपरी छ । दुई सिटको ठाउ“मा तीनजना राख्ने र तीनजनाको ठाउ“मा चारजना राख्ने गरिन्छ । यसबाट यात्रुहरुको उपभो ग्य से वाको अधिकार कटौ ती भएको छ । जसको कारण यात्रा सकस हुन्छ । त्यस् तै ट्याम्पो र सिक्सा भाडामा पनि मनो मानी छ । उनीहरु ग्राहक हे रे र पै सा तो क्छन् । अरु यस् ता गाडीहरुमा न चालक लाइसे न्स छ न त यात्रु बिमा छ । यस् तो सवारी दुर्घटना हु“दा क्षतिपूर्ति पाइ“दै न । उपभो क्ता यसबाट पनि ठगिएका छन् । हो टलहरुमा पनि उस् तै छ । दूधमा पानी मिसिएको चिया र पानीमा दूध मिसाएको चियाको मूल्य एउटै छ ।
जस् तो हो स् बचे कुचे का खाद्यवस् तु फ्रिजमा राख्ने र भो लिपल्ट तताएर बिक्री गर्ने त सामान्य भयो  । अझ फे न्सी सामानमा अचाक्ली भाउ फरक छ । नक्कली सामान र सक्कली सामान उपभो क्ताले चिन्न सक्दै न । जुत्ता किन्न जानुहो स् एउटै वस् तुलाई कतै १५ सय कतै २५ सय मूल्य बताउ“छन् । फलानो ठाउ“मा यतिमा पाइन्छ भने त्यो डुव्लिके ट समान हो भन्दै आफ्नो ओ र्जिनल भएको दाबी गर्छन् । हामीले बिरामी हु“दा प्रयो ग गर्ने औ षधिमा पनि ठगिएका हुन्छौ ं । औ षधिमा प्रिन्ट रे ट दे ख्यांै भने चुप लागे र पै सा तिछौर् ं । औ षधि किन्दा घटाउने कल्पना गर्दै नौ ं । एक हजार २० रुपै या“को औ षधि किन्दा पसले ले २० रुपै या“ पनि छो ड्दै न । हामीले एक हजार रुपै या“को नो ट साटे र भए पनि २० रुपै या“ दिन्छौ ं । औ षधिहरुमा कम्पनीअनुसार धेरै नै नाफा हुन्छ । इन्डियन कम्पनीभन्दा ने पाली औ षधि बढी सस् ता हुन्छन । एक हजारको औ षधिमा कम्तिमा पनि १५ प्रतिशतले पनि व्यापारीे ले एक सय ५० रुपै या“ नाफा लिन्छ । तर एक सय ५० मा उसले १०÷२० रुपै या“ छो ड्दा के बिग्रन्छ ? हाम्रो औ षधिमा मूल्य नघटाउने संस् कारले आफै गठिएका छौ ं ।
प्राइभे ट अस् पतालमा त्यस् तै ठगिन्छ । तपाइ“ सामान्य रुघा लागे र जानु भयो भने फि त छ“दै छ त्यसपछि परीक्षण गरे पछि रगत जा“च, पिसाव जा“च, नाक र घा“टीको इन्डो स् को पी गर्ने सुगर चे क गर्ने , आदि लफडा लगाइन्छ । ती काम आवश्यक नभए पनि क्लिनिकको फाइदाका लागि गरिन्छ । यसबाट हामी स् वास् थ्य क्षे त्रमा पनि ठगिन्छौ ं । अझ प्राइभे ट स् वास् थ्य संस् थामा थप से वा शुल्क थप २० रुपै या“ लगाइन्छ । तरकारी बजारमा मनपरी छ । किसानस“ग १० रुपै यॉ किलो किने को तरकारी बिचौ लियाहरुबाट नाफा खा“दै जा“दा उपभो क्तासम्म ४० रुपै या“ किलो किन्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा पाइने चाउचाउ, नम्किन, बिस् कुट, कुरकुरे जस् ता थुप्रै रे डिमे ट खाद्यवस् तुहरु म्याद नाघे का पाइन्छन् । औ षधि किन्दा मात्र म्यादको ख्याल गर्ने तर खाद्य सामग्रीका म्यादको ख्याल नगर्ने हाम्रो बानी छ । हामी सचे त नहु“दा आफै ठगिएका छौ ं भने बिक्रे ताले जानीजानी ठग्छन् ।
त्यसो त पसलहरुमा ढकको सट्टा साबुन, चियापत्ती, फलामको टुक्रा, ढुंगाजस्ता वस्तु राख्ने गरिन्छ । त्यस् ता वस् तुले तौ ल गर्दा हामी सहजै विश्वास गर्छाै ं । उपभो क्ताको कम्जो री हो प्रतिवाद गर्न सक्दै नौ ं । हामी विकास निर्माणका कुरामा पनि ठगिन्छौ ं । गाउ“मा सानो यो जना भएको छ भने नाटकीयरुपमा मात्र उपभो क्ता समिति गठन गर्ने अदृष्य ठे क्कासम्वन्धी निकायका मान्छे हरुले लिने र नाफा कमाउन कम गुणस् तरको भौ तिक निर्माणको काम हुन्छ । के यसमा उपभो क्ताबाट आवाज उठाउने काम भएको छ त ?
बजारमा सडक अतिक्रमण हु“दा बाटो सहज हुन सके को छै न । यसले सडक पे टीका सामान र यातायातका साधन राखिदिन सडक उपभो क्ताहरुको पे टिबाट हिड्ने अधिकार खो सिएको छ । यस् ता अनगिन्ती समस् याहरु हाम्रो दै निक जीवनमा उपभो क्ता ठगिने कुराहरु वर्णन गरे र नभ्याइएला । त्यसै ले के न्द्रदे खि जिल्लासम्म उपभो क्ता अधिकारवादी संस् था खुले का छन् तर त्यस् ता संस् थाहरुले पनि उपभो क्ता अधिकारमा ठो स काम गर्न सके का छै नन् । राज्यस् तरबाट पनि उपभो क्ता अधिकारबारे जागरण गराउने सवालमा सिन्को भा“चिएको छै न भने विचरा अधिकारवादी संस् थाले के गरुन् ? बजे टको अभावमा कुनै काम गर्न सकिन्न । न राज्य आफै गर्छ न त अधिकारवादी संस् थास“ग सहकार्य गर्छ । उपभो क्ताले अधिकारका बारे मा बहस चलाउन नसक्दा उपभो क्ताहरुमा जागरण आउन सके को छै न । उपभो क्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभो क्ता संरक्षण ऐ न २०५४ र उपभो क्ता संरक्षण निमावली लागु भए पनि त्यसको अनुभूति उपभो क्ताले गर्न पाएका छै नन् । उक्त ऐ नले खाद्यवस्तुको कुरा मात्र हो इन, अन्य अनियमित कामबाट पनि उपभो क्तालाई संरक्षण दिन खो जे को छ ऐ नले  । भ्रामक विज्ञापन गरी उपभो क्तालाई छक्याउने संस् था वा व्यक्तिलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने ऐ नले व्यवस् था गरे को छ । कानूनविपरीत भएको उपभो ग्य वस् तुको प्रयो े ग र से वाबाट कसै को ज्यान जान सक्ने खतरा भए १४ वर्ष जे ल र पा“च लाख जरिवाना तथा अंग भंग हुने खतरा भएमा १० वर्ष कै द र पा“च लाख जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस् था छ । उपभो क्तालाई हानी गनेर् उपभो ग्य वस् तु फे ला पारे मा त्यस् ता सामान जफत गर्न सक्ने कानूनले अधिकार दिएको छ । विडम्बना के छ भने नियमकारी निकायबाट सो चे जति प्रयास हुन सके को छै न ।
त्यसै गरी नामधारी उपभो क्ता अधिकारवादी पनि चुपचाप छन् आफै ठगिए पनि बो ल्दै नन् । यस् तो प्रबृतिकै कारण उपभो क्ता ठगिएका छन् । अन्य उपभो क्तालाई अधिकारको बारे मा सचे त गराइ किन र कसरी भने र औ ंला ठ¥याउने र ठगहरुस“ग बहस चलाउने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ ।
Previous: छजना युवा पुरस्कृत
Next: आफ्नैबाट बच्न अप्ठ्यारो !